I-Huajiao S02@Hongyadong amafasitela e-French amamitha ayi-100/Jiefangbei/Igumbi lokubuka lomfula eliwumugqa wokuqala/Ubuka i-Jiangbeizui Liangjiang Grand Theatre Raffles City
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-花椒民宿品牌店
U-花椒民宿品牌店 unokuphawula okungu-515 kwezinye izindawo.
Uma useshela umthombo wale suite futhi ubonisa ukuthi igumbi ligcwele, sicela uchofoze kulogo yami ukuze ubuke ukufakwa kuhlu kwezitolo eziningi.
Le suite itholakala kumamitha ayi-100 ukusuka eHongyadong 5A endaweni ebabazekayo eChongqing, eduze nesifunda sebhizinisi saseJiefangbei, Haochi Street, Kuixing Tower, Line 2 Linjiangmen Light Rail Station, futhi ezokuthutha zilula kakhulu. Kusukela esitezi sokuqala esiphumayo sale suite, ungaya eHongya Cave, indawo yokuthwebula ethi "Passing through You All Over the World" kanye "You are the young". Kusukela ekuphumeni esitezi se-13, ungafinyelela Isakhiwo sase-Kuixing "Ngobuciko Bobuciko Bedolobha Le-8D", ezokukhombisa ubuhle be-"8D Magic City" ka-Chongqing. Qhubeka uhambe ukuze uthole ugwayi ukuze ufike ku-Jiefangbei Haochi Street. Kulula ukuhamba, futhi i-8D izwakala igcwele.
Igumbi lokubuka lomfula i-Hongyadong eliwumugqa wokuqala, amafasitela amakhulu asuka phansi kuya ophahleni, umbono ongaphambili weGrand Theatre, ukukhanya okuhle kakhulu kokubuka ebusuku—Jiangbeizui, Chongqing Double Net Red Bridge (Qiansimen Bridge & Yellow Garden Bridge), Chaotianmen River Intersection, Changbin Road Nanbin Road Night izibani, cruises ezimbili emfuleni. Ikuvumela ukuthi ube nombono we-panoramic wokubuka okuhle kakhulu ebusuku kwe-Chongqing kanye nokubukwa komfula okuhle kakhulu okuvela egumbini. Indawo yawo wonke amagumbi e-Huajiao isuka ku-50-80 square metres, enezingubo ezithambile ezahlukahlukene ngokuya ngezitayela ezahlukahlukene, ezilungele ukuthatha izithombe nokungena. Igilamafoni esebenza nge-Bluetooth inikezwa ekamelweni ukuze kuthuthukiswe umuzwa wakho wokuhlala.
1. [Umbhede] Omatilasi be-latex abakhethekile kanye nezingubo zokulala ezineziqephu ezinhlanu zamahhotela alinganiselwe izinkanyezi ziyi-satin eyenziwe ngemicu engama-60. (Imibhede ithunyelwa enkampanini yokuwasha echwepheshile ukuze iwashwe, ibulawe amagciwane kanye noku-ayina okunezinga lokushisa eliphezulu.)
2. [Ubhavu] Isitayela ngasinye sokuhlobisa sifakwe obhavu besitayela esihlukile, bonke abafakelwe amanzi ashisayo asheshayo kubhavu, futhi afakwe izikhwama zikabhavu zamahhala ezilahlwayo.
3. [Indlu yangasese]: Ifakwe indlu yangasese ehlakaniphile, ishawa yokushisa eshintshashintshayo enesifutho esiphezulu, namanzi ashisayo amahora angu-24 eshaweni.
4. [Izinto ezilahlwayo]: Iwashi eyizingcezu ezinhlanu isethwe emahhotela anesilinganiso sezinkanyezi, uhlobo oluwugqinsi olungasheleli lweziliphu ezilahlwayo, isikhwama sikabhavu esilahlwayo, uketshezi lomiyane, okokuhlanza izingubo, izixhumi ezindlebeni ezilahlwayo, amanzi amaminerali, njll. Zonke izinto zimahhala.
5. [Izingubo zokugeza namathawula]: efakwe izingubo zokugeza ezikhethekile namathawula okubulala amagciwane amahhotela alinganiselwe, zonke izingubo zokugeza namathawula kuqinisekisiwe ukuthi zizoshintshwa futhi zibulawe amagciwane esivakashi ngasinye ukuze kuqinisekiswe ukuhlanzeka nokuhlanzeka. (Izingubo zokugeza namathawula kuthunyelwa enkampanini yokuwasha echwepheshile ukuze ziwashwe, zibulawe amagciwane kanye noku-ayina okunezinga lokushisa eliphezulu.)
6. [Ikhodi yokukhiya ye-elekthronikhi]: Bonke okhiye bekhodi ehlakaniphile be-Huajiao bangashintshwa ngekhasimende elilodwa, abasasebenzi, baphephile futhi bafaneleka.
7. [Izinto zikagesi zasekhaya]: Umshini wokushisisa owodwa nowodwa onguthelawayeka oyi-3P, i-projection ephezulu-intshi engu-100-intshi, umshini wokuwasha izigubhu ozishintshayo ngokugcwele onomsebenzi wokomisa; isiqandisi esincane se-retro, igilamafoni ye-Bluetooth, ithuthukisa ulwazi lwakho lokuhlala.
8. [Inethiwekhi]: Inethiwekhi yokuthutha ebonakalayo ye-100M ezimele kakhulu, inethiwekhi ye-T-plink router ezimele yegumbi ngalinye.
9. [Abanye]: ibhokisi lokuthunga, isethi yosizo lokuqala, isikelo esincane, utshwala, ukuze uyisebenzise ezimeni eziphuthumayo.
10. [Idizayini nendawo]: Indawo esetshenziswa kuwo wonke amagumbi kupelepele we-Sichuan isukela ku-50-80 square metres. , macarons, njll isitayela. Ngokusho kwezitayela ezahlukene, siklame izingubo ezithambile ezihlukene, ezifanele kakhulu ukuthatha izithombe namakhadi okubhoboza.
[I-Huajiao Homestay] Wonke amagumbi angamagumbi azimele, amagumbi okugeza azimele, amagumbi okulala azimele, amagumbi okuhlala azimele, njll. Izitayela zokuhlobisa zihlukile, zinezitayela ezahlukene kanye nezinhloso ezahlukene zangempela. Igumbi linombono obanzi, igumbi lokubuka lomfula i-Hongyadong eliwumugqa wokuqala, amafasitela amakhulu asuka phansi kuya ophahleni, ebuka i-Grand Theatre, ukukhanya okuhle kakhulu kokubukwa kwasebusuku—Jiangbeizui, Chongqing Double Net Red Bridge (Qiansimen Bridge & Yellow Garden ibhuloho), Chaotianmen River Intersection, Changbin Road, ebusuku izibani isikhathi eside Nanbin Road, cruises ezimbili emfuleni. Ikuvumela ukuthi ube nombono we-panoramic wokubuka okuhle kakhulu ebusuku kwe-Chongqing kanye nokubukwa komfula okuhle kakhulu okuvela egumbini.
U花椒民宿品牌店 Ungumbungazi ovelele